Kuwa ugu Waxyoon ee Mob Psycho 100 Xigasho Waxaad U Baahan Tahay Inaad Aragto - Kale
Xigashooyinka Mob ee ugu Fiican 100 Xigasho Aad U Baahan Tahay Inaad Aragto Kuwaasi Waa Waxyoon
Mob Psycho 100 xigashooyin ku xusan:
Mob Psycho 100 wuxuu u muuqdaa mid dhalaalaya aragtida koowaad, oo leh vibes la mid ah One Punch Man ama Saiki K.
Laakiin sida taxanaha anime labadaba - waxaa jira macno qoto dheer oo xambaarsan sheekada. Tani waa waxa ku dhasha oraahyada waaweyn ee leh casharada nolosha ee aan dhammaanteen wax ka baran karno.
Waa kuwan kuwa ugu mudan ee la xuso…
The BEST Mob Psycho 100 Xigasho:
Xigashooyinka Reigen Arataka
anime ugu fiican waqtiga oo dhan
'Haddii aad si khaldan u isticmaasho awood aad u weyn, naftaada oo keliya ayaad baabi'in doontaa.' - Reigen Arataka
Ha sameyn Mob. Markay wax u socdaan koonfurta, waa caadi in la cararo! - Reigen Arataka
“Haddii aysan wax kale jirin, iyagu waxbay ii yihiin. Mana aha aniga oo keliya. Ka fikir dhammaan macaamiisha aad ka caawisay awoodahaas. Ha kaliya diirada saarin diidmada. Waa wax walba oo ku saabsan sida aad u isticmaasho mindiyo, xusuusnow? Ha ku dheereyn naftaada. Adigu waxaad tahay qofka haysta awoodda aad ku kordhinayso kartidaada. Ii aamin aniga waad fiicnaan doontaa. ' - Reigen Arataka
“Si fiican u dhageyso, waxaan ka duwan nahay dadka caadiga ah maxaa yeelay waxaan ku dhalanay awoodo gaar ah. Laakiin taasi waa inaysan ku siin dhalanteed ah inaad tahay qof gaar ah. Waxaan ka mid nahay aadanaha. Ka sokow awoodeenna dhifka ah, innagu kama duwana iyaga. Dadka orodka badan, dadka si fiican u heesan kara, dadka waxbarashada adag, dadka qosolka badan, iyo dadka leh awooda maskaxda. Miyaan ka duwanahay iyaga? Inaad kalsooni ku qabtid xooggaaga, waa wax fiican laakiin ha ku qaadin. Awoodaheena waa hub halis ah. ” - Reigen Arataka
Xigasho Musashi Goda
“Ma aqaano waxa aad isaga ku heyso… Laakiin ma aha nin aad kaliya ku tuman karto… Sax, Kageyama? Qof kula mid ah… ma doonayo inaan isaga dhiibo! Waxaan nahay tababarayaal saaxiibo ah! Waligaa si adag baad u shaqeynaysay! Immisa jeer ayaad u burburtay dhiig la'aan ama dhaawacyo dartiis? Haddana marwalba waad taagnayd oo waad sii waday. Muhiim maaha haddii aadan ciyaartooy ahayn. Waa howsha koritaankaaga… Waxaad na tustay intaad halgantay. Waxaad na siisay geesinimo. Taasna… maahan wax qof si fudud u burburin karo! Weerarida qof adiga kaa itaal daran… Taasi waa sababta aanan Kageyama kuugu soo dhiibi doonin !! - Musashi Goda
animes la mid ah kalgacalka franxx
“Ma la yaabtay? Murqaha lagu dhisay awood maskaxeed, weligood uma fiicnaan doonaan muruqyada sida habboon loo tababaray! Shigeo wuu saxsanaa waqtigaan oo dhan! ” - Qurux
Shigeo Kageyama Quotes (Mob)
'Faa'iido maleh inaad isku daydo inaad iga takhalusto, maxaa yeelay waxaan nahay walaalo.' - Shigeo Kageyama
“Maxaan doonayaa inaan sameeyo… Ma hayaa wax aan doonayo inaan sameeyo? Qof kasta oo kale ma leeyahay wax? Wax lagu farxo? Wax aan ka hinaaso? - Shigeo Kageyama
'Awoodaha maskaxiyan looma baahna inay ku noolaadaan meesha ugu horeysa.' - Shigeo Kageyama
'Farshaxanada Con waa runtii dad cabsi badan.' - Shigeo Kageyama
Ma doonayo inaan arko qof kale oo wax yeelaya dadka, ama qof kale oo wax yeelaya. - Shigeo Kageyama
Waan ogahay taas mar hore, waan ogaa tan iyo waagii hore. Aqoonsiga runta ah ee sayidkayga. Waa ‘qof wanaagsan.’ - Shigeo Kageyama
Toichiro Suzuki Xigasho
“Dunida ma jiro jaajuus iga xoog badan. Waxaan hayaa awooda ugu weyn dhamaantood. ” - Toichiro Suzuki
Qofka noloshiisa ugu noolaan kara sida uu rabo waa qof xoogan. ” - Toichiro Suzuki
Xigasho Sho Suzuki
'Waxay ahayd wicitaan sax ah oo isku dayaya inaan saaxiib kula noqdo kadib.' - Sho Suzuki
Weerarku waa difaaca ugu fiican. ” - Sho Suzuki
Ilaa iyo inta ay tahay shaqo maskaxiyan maskaxeed, wax baan ka fikiri karaa. - Sho Suzuki
anime wanaagsan si aad u daawato english dub
Xigasho Ritsu Kageyama
'Haddii cabsi ay i gilgilayaan oo maskaxda iga maydhayaan, waxaan door bidi lahaa inaan baxsado, xitaa haddii ay macnaheedu tahay inaan dhinto.' - Ritsu Kageyama
Ma aqbalayo in aan guuldaro kala kulmo walaalkey weyn mooyee. ” - Ritsu Kageyama
Waan xamili kari waayey liidashadayda iyo cabsida aan idinku qabo, sidaa darteed naftayda ayaan ku ilaashanayay anigoo u malaynaya inay tahay wax la ixtiraamo. ” - Ritsu Kageyama
Anigu xukumi maayo dadkaaga. Sababta oo ah hadda waan ogahay… Marka dadku ay ka leexdaan wadada saxda ah, badanaa ma jiraan sabab dhab ah. Waa sidaas oo kale xitaa hadda. Waxaan wajahayaa cadawyo lumiyay dhammaan doonistii aan ku dagaallami lahaa, waxaanan u guurayaa rabshad darteed. Ma jiro sabab dhab ah of Xorriyadda noocan ahi way adag tahay, aad baan uga xoroobnahay dhammaantiin… Waayo? Sababtoo ah waxaan waayey xadka. Waxaan helay khasaare! - Ritsu Kageyama
noloshu waa laakiin riyo riyo ah oo cowboy ah
“Dimple really runtii waad xanaaqsan tahay. Dheh… Haddii aan awood u yeesho xakameynta awooddan… Miyaan kaa takhalusi karaa? - Ritsu Kageyama
Sababtoo ah waan xanuunsanayaa naftayda. Waxaan kaliya rabay inaan to dareemo 'nacasnimada' naftayda. Iyo in la abuuro is cusub. Aniga, sidii nacas. - Ritsu Kageyama
Keiji Mogami Xigasho
Dhibaatooyinka oo dhan kuma xallin kartid naxariistaada. Mararka qaar, waxaad u baahan tahay inaad ku adkaato dadka kale. ” - Keiji Mogami
38 ee xigashooyinka ugu xiisaha badan ee Gurren Lagann Si aan kuu siiyo Geesi
15 Ka Mid ah Kuwa Ugu Xoog Badan Mid Ka Mid Ah Punch Man Anime Quotes
gacaliso franxx gurren lagann
top toban taxane anime waqtiga oo dhan
maxay sawirada pvc aad u qaali yihiin